कोभिड–१९ कारण जापानमा ३० लाख रोजगारी गुम्ने खतरा – korea pati
कोभिड–१९ कारण जापानमा ३० लाख रोजगारी गुम्ने खतरा
May 21, 2020 Korea patiLeaveaComment on कोभिड–१९ कारण जापानमा ३० लाख रोजगारी गुम्ने खतरा
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण जापानमा ३० लाख भन्दा धेरैले रोजगारी गुमाउने देखिएको छ । बुधवार एक अनुसन्धान संस्थाले यस्तो बताएको हो ।
आगामी मार्चसम्मको एक वर्षमा कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण ३० लाख १० हजारले रोजगारी गुमाउन सक्ने मध्य जापानको नागोयास्थित चुबु रिजन फर सोसल एण्ड इकोनोमि रिसर्चले बताएको हो ।
गत वर्षको तुलनामा जापानी रोजगारीमा साढे ४ प्रतिशतको कमी आउनेछ । यो सन् २००८-०९ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटको तुलनामा निकै खराब हो । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी लेह्म्यान ब्रदर्श धराशयी भएपछि उत्पन्न आर्थिक संकटको बेलामा आर्थिक वर्ष २००९ मा जापानमा ९ लाख ५० हजार रोजगारी गुमेको थियो ।
पछिल्लो प्रक्षेपण आगामी मार्चमा सकिने आवमा जापानमा आउने विदेशी आगन्तुकको संख्यामा सुधार आउँदैन भन्ने अनुमानमा आधारित छ । क्षेत्रगत हिसाबले खुद्रा र थोक विक्रेताकहाँ ८ लाख ४५ हजार रोजगारी गुम्नेछ । म्यानुफ्याक्चरिङमा ६ लाख १४ हजार र बसोबास र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले भने ५ लाख ८९ हजार रोजगारी गुमाउने अनुमान छ ।
लेह्म्यान झट्काको बेलामा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र बढी मारमा परेको थियो तर अहिले भने सबै क्षेत्र प्रभावित भएको चुबु रिजन फर सोसल एण्ड इकोनोमि रिसर्चमा अर्थशास्त्री र्योइची नाम्बाले भने । मार्चमा जापानको बेरोजगारी दर बढेर एक वर्षकै उच्च बिन्दु साढे २ प्रतिशतमा पुगेको थियो ।
आगामी महिनामा भने अवस्था झनै खराब बन्ने अपेक्षा विश्लेषक र सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन् । फेबु्रअरीमा १ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको रोजगारी उपलब्धता समेत मार्चमा खस्किएर १ दशमलव ३९ मा आएको छ । यो साढे ३ वर्षकै न्यून भएको अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको थियो । १ दशलव ३९ रोजगारी उपलब्धताको अर्थ कामको खोजी गर्ने हरेक सय जनाका लागि १३९ रिक्त पद भन्ने हो । एजेन्सी
रेफ्रिजरेटर प्रयोग गर्नेले जान्नैपर्ने कुराहरु !
अन्ततः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मास्क लगाउन बाध्य
कोरोना मुर्दावाद!नेपाली सुकुटी अचार जिन्दाबाद!
April 17, 2020 Korea pati